सिनेमा | Nepali Virals
फेब 4, 2018 | फेमस, सिनेमा
हातमा मैला सुनाका थैला के गर्नु धनले
साग र सिस्नु खाएका बेस आनन्दी मनले
तपाइँले धेरै पटक मुनामदनमा महकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेका यी पङ्तिहरू पढ्नु भएका होला । तर, आधुनिक विश्व त्यस्तो छैन । यहाँ मानिसहरू पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । बलिउडका नाम चलेका अधिकांश अभिनेत्रीहरूले आफ्नो सुन्दरताको भर्‍याङ बनाउँदै धनाढ्यहरूसँग विवाह गरेका छन् ।
आज हामी त्यसरी धनाढ्यहरूसँग विवाह गर्ने टप १० बलिउड अभिनेत्रीहरू’bout चर्चा गर्दछौँ ।
१. टिना-अनिल अम्बानी
भारतकै धनाढ्य अर्बपतिमध्येमा पर्ने अनिल अम्बानीकी श्रीमती टिना अम्बानी सन् १९८०का दशकमा बलिउडकी लोकप्रिय अभिनेत्री थिइन । उनले आफ्नो करिअरमा नाम, प्रतिष्ठा र सम्पत्ति पनि राम्रै आर्जन गरेकी थिइन, तर सबै कुरा टिकेनन् । उनको ख्याती विस्तारै खस्न थाल्यो, आफूलाई पुनः स्थापित गर्ने क्रममा टिनाले अनिल अम्बानीलाई चुनिन ।
२. सेलिना जेटली- पिटर हाग
कुनै समय सेलिना जेटली निकै चलेको नाम थियो । प्रसिद्धिको जुन शिखरमा उनी हिडिरहेकी थिइन, त्यसका तुलनामा उनका आय सन्तोषजनक थिएन । त्यसैले उनले अष्ट्रेलियाका धनी व्यवसायी पिटर हागलाई चुनिन । पिटर हाग एक होटल व्यवसायी हुन् । सेलिनाले २०११ मा पिटरसँग बिहे गरेपछि बलिउडबाट टाढिएकी हुन् । विवाहपूर्व नै गर्भावती भएपछि उनले पिटरसँग हतारहतार विवाह गरेकी थिइन ।
३. श्रीदेवी-बोनी कपुर
९० को दशककी प्रसिद्ध नायिका श्रीदेवीका तुलनामा उनका पति बोनी कपुर निकै बुढा छन् । यही कारण अधिकांश मानिसहरू श्रीदेवीले सम्पत्तिकै लागि उनी नायक अनिल कपुरका दाजु बोनी कपुरसँग विवाह गरेको बताउने गर्छन् । बोनी कपुरले जेठी श्रीमती मोना शाैरीलाई त्यागेर श्रीदेवीसँग विवाह गरेका हुन् ।
४. अमृता अरोरा-शकील लद्दाख
आफ्नी पहिली पत्नीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेपछि धनाढ्य व्यापारी शकील लद्दाखले पुनः प्रेमिल जीवनका अनुभव गरे । यस पटक उनले साथ पाएका थिए बलिउड अभिनेत्री अमृता अरोराको । विवाहपूर्व नै गर्भवती भएका कारण आलोचना खेप्नु परे पनि अमृताका लागि यो भाग्योदयका समय बन्यो । उनले औपचारिक रूपमा नै शकील लद्दाखसँग विवाह गरिन भने अहिले उनका दुई छोराहरू छन् ।
५.विद्या बालन-सिद्धार्थ राय कपूर
विद्या बालन हलिउडकी स्थापित अभिनेत्री हुन् भने सिद्धार्थ राय कपूर बलिउडका सफल निर्माता । दुवैले एकै साथ काम गर्न थालेपछि दुवैबीच आकर्षण बढेको हो । वास्तविकता जे भए पनि विद्या बालनले पैसाकै लागि सिद्धार्थ राय कपूरसँग विवाह गरेकी हुन् भन्ने जनमानसमा परेको छ ।
६. आयशा टाकिया- फरहान आजमी
बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्रीहरूमध्येमा पर्ने आयशा टाकिया मोडल पनि हुन् भने उनी एक चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता पनि हुन् । अर्कातिर फरहान आजमी पनि सुन्दरता (ह्यान्डसमनेस)का आधारमा कम भने छैनन, तर उनी धनाढ्य भएकै कारण आयेशा टाकियाले पैसाकै कारण उनलाई चुनेका धारणा छ ।
७. किम शर्मा- अली पुञ्जानी
बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री किम शर्माका नाम यसअघि स्पेनका कार्लोससँग जोडिएको थियो । विश्वासिलो स्रोतहरूका अनुसार कार्लोसका तुलनामा किमबाट बढी प्रभावित भएका केन्याका धनाढ्य व्यापारी अली पुञ्जानीलाई किमले पैसाले तानेको बताउँछ । किम र कार्लोसबीच कुनै पनि वैवाहिक समस्या नभए पनि पैसाकै कारण अन्ततः उनले अली पुञ्जानीसँग दोस्रो घरबार गरिन् ।
८. डिम्बी गांगुली र राहुल महाजन
डिम्पी गांगुली खासै चर्चित अभिनेत्री होइनन । उनका बलिउडमा त्यति ख्याति पनि छैन । तर, उनले धनाढ्य व्यक्ति राहुल महाजनलाई फँसाइन र विवाह गरिन । भनिन्छ, डिम्पी धनाढ्य व्यक्तिलाई फँसाउनैका लागि फिल्मी उद्योगमा आएकी थिइन । उनले विवाहपछि बलिउड अभिनययात्रा त्यागिन ।
९. जुही चावला-जय मेहता
बलिउडकी सफल अभिनेत्रीमध्यकी जुही चावलाका लाखाैं प्रशंसकहरू उनीसँग जीवन बिताउन चाहन्थे, तर ती लाखाैं प्रशंसकहरूलाई निराश बनाउने जुहीले आफूभन्दा केही वर्ष जेठा जय मेहतासँग विवाह गरिन । उनीहरूबीचको उमेर अन्तर देखेर जोकोहीले पनि पैसाकै लागि जुहीले जय मेहतालाई छानेको अन्दाज लगाउन सक्छन् ।
१०. शिल्पा सेठ्ठी-राज कुन्द्रा
भारतकी सर्वाधिक राम्रीमध्ये मानिएकी शिल्पा सेठ्ठीले अचानक दुबई जाने फैसला किन गरिन भन्ने बलिउडमा अनेक अफवाह फैलन नपाउँदै उनले राज कुन्द्रासँग विवाह गरेको खबर बाहिर आयो । राज कुन्द्रा दुबईका प्रख्यात व्यापारी हुन् ।
अप्रिल 19, 2016 | बिर्सेका, समाज, सिनेमा, हट टपिक्स, हाँसोउठ्दो
सोमबार बिहानै अधिकांश अनलाइनमा एउटा न्युजले प्राथमिकता पायो । नेपालमा अहिलेसम्म २० जनाले कपाल प्रत्यारोपण गरिसकेका छन् । यो प्रविधि टाँका लगाइने वा कुनै प्रकारको दाग देखिने खालको होइन । टाउकोमा बढी कपाल भएको ठाउँबाट एक–एकवटा कपाल निकालेर नभएको भागमा रोकिने कार्य हो । कपाल रोप्न कपालको मात्रा अनुसार ४ देखि ६ घन्टा लाग्छ ।
नेपालका लागि यो नौलो भए पनि बिश्वमा यो कुनै नौलो कुरा होइन । बलिउडका थुप्रै सेलिब्रेटीले कपाल खुइलेर नयाँ कपाल रोपेका छन् । व्यक्तित्व राम्रो देखाउनका लागि पनि कपालको ठूलो महत्व हुन्छ । त्यसो त सेलिब्रेटीहरुका लागि झन् यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
बलिउडका नायिकाहरुले आफ्नो सुन्दरता बढाउन प्लास्टिक सर्जरी अनि अनुहार चम्काउने ट्रिटमेन्ट गराउँछन् । नायिकामात्र होइन, नायकहरु पनि आफ्नो ‘लुक्स’ राम्रो देखाउन विज्ञानको मद्त लिने गरेका छन् । सलमान खान, अक्षय कुमार जस्ता सफल नायकहरु कुनै बेला तक्ले थिए । कपाल झर्ने समस्याले पिरोलिएका यी नायकहरुले ‘हेयर ट्रान्सप्लान्ट’ गरिसकेका छन् । यी ८ नायक जसले कपाल रोपेर ह्यान्डसम बने ।
फोटो: न्यूजफ्लिक्स डट आइएन
२०७२ मा चर्चित ८ हिरो
अप्रिल 15, 2016 | फेमस, समाज, सिनेमा, हट टपिक्स
नेपाली फिल्मी क्षेत्रका लागि ०७२ साल सुखद नै रह्यो । समग्रमा यो बर्ष धेरै वटा चलचित्रले राम्रो ब्यापार गरे । त्यसो त यो बर्ष नेपाली फिल्ममार्फत डेब्यु गरेका हिरो हिरोइनहरु मध्ये केही निकै चर्चामा आए । कतिपय नया अनुहारले पुराना अनुहारलाई जितेका छन् भने केही पुराना कलाकारहरु पनि निकै चर्चामा आए । हेर्नुस ०७२ सालमा चर्चित ९ हिरो ।
हास्य अभिनेता तथा निर्देशक दीपकराज गिरीले यो वर्ष ‘वडा नम्बर ६’ तयार पारे । आफूसहित लोकप्रिय हास्यकलाकारहरूको समूहबाट निर्मित उक्त चलचित्रमा दीपकराजको अभिनय मन पराइयो । चलचित्रको कथामात्र नभै ‘सुर्के थैली खै…’ गीतले पनि ऐतिहासक सफलता हासिल गर्‍यो । दोस्रो चलचित्र पनि व्यवसायिक रूपमा सफल भएपछि दीपकराज गिरीको समूह यतिबेला चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ निर्माण गरिरहेको छ ।
source: Mero cinema
०७२ मा अभिनेता दयाहाङ राईले अभिनय गरेका चारवटा चलचित्र प्रदर्शन भए । तीमध्ये ‘कबड्डी–कबड्डी’ ले उत्कृष्ट व्यवसाय गर्‍यो । यसअघि नै व्यवसायिक रूपमा सफल भैसकेको चलचित्र ‘कबड्डी’ को यो सिक्वेल चलचित्रले पनि दर्शकलाई प्रशस्त मनोरञ्जन प्रदान गर्‍यो । ‘कबड्डी कबड्डी’ बाहेक दयाहाङले ‘वडा नम्बर छ’ बाट पनि प्रशंसा कमाए । अन्य दुई चलचित्रले औसत व्यवसाय गरे । वर्ष २०७३ मा दयाहाङले अभिनय गरेका ‘लालटिन’, ‘हाउ फन्नी’, ‘वीर विक्रम’ सहित आधा दर्जनभन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शनमा आउनेछन् ।
अभिनेता आर्यन सिग्देलले यो वर्ष अभिनय गरेका दुई चलचित्र प्रदर्शन भए, ‘क्लासिक’ र ‘आवेग’ । व्यवसायिक रूपमा सफल चलचित्र ‘क्लासिक’ मा आर्यनको भूमिका मन पराइयो । यो चलचित्रमा आर्यनले आँखा देख्न नसक्ने पात्रलाई जीवन्तता प्रदान गरेका थिए । दोस्रो चलचित्र ‘आवेग’ मा उनी एक्सन हिरोका रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए, जसलाई दर्शकहरूले खासै रुचाएको पाइएन । वर्ष २०७३ मा उनी आफ्नै ब्यानरका चलचित्रमार्फत दर्शकमाझ पुग्ने तयारी गर्दैछन् ।
अभिनेता भुवन केसीका छोरा अनमोल केसी वर्ष २०७२ मा प्रदर्शन भएका चलचित्रमध्ये सर्वाधिक व्यवसाय गर्न सफल चलचित्र ‘ड्रिम्स’ का अभिनेता हुन् । ‘ड्रिम्स’ ले प्रदर्शनमा आएको तीन सातामा करिब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसाय गरेको वितरकहरूको दाबी छ । चकलेटी अनुहारका धनी अनमोललाई दर्शकहरूले रोमान्टिक शैलीको भूमिकामा मन पराउँछन् ।
बलिउडका सलमान खानसँग समेत तुलना गरिने अभिनेता सविन श्रेष्ठले अभिनय गरेका ४ वटा चलचित्र प्रदर्शन भैसकेका छन् । संख्यात्मक हिसाबले सविन यो वर्ष सबैभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गर्ने अभिनेता हुन् । तीमध्ये ‘सपना तिम्रो मेरो’ तथा ‘भाग सानी भाग’ ले औसतभन्दा राम्रो व्यवसाय गरेका छन् ।
करिब आधा दशक नेपाली चलचित्रबाट टाढिएका निखिल उप्रेती यो वर्ष चलचित्र ‘भैरव’ मार्फत दर्शकसमक्ष आए । एक्सन प्रधान ‘भैरव’ व्यवसायिक रूपमा अत्यधिक सफल भयो । चलचित्रबाट निखिलले पनि प्रसस्त प्रशंसा बटुले । देशमा विद्यमान तराई–मधेसका मुद्दामा आधारित यो चलचित्र अझै पनि तराईमा प्रदर्शन गरिएको छैन । निखिलकै मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘लुटेरा’ पनि व्यवसायिक रूपमा सफल भयो ।
रंगमञ्चबाट चलचित्रमा आएर स्थापित भएका अभिनेता सौगात मल्लले अभिनय गरेका चलचित्रमध्ये ‘कबड्डी कबड्डी’ अत्यधिक सफल भयो । यो चलचित्रमा सौगातले यसअघि निर्वाह नगरेको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जसलाई दर्शकले मन पराए । त्यसो त व्यवसायिक सफलता हासिल गर्नबाट चुकेको चलचित्र ‘फन्को’बाट पनि सौगातले प्रसंसा नकमाएका होइनन् ।
अभिनेता जीवन लुइँटेलले अभिनय गरेका दुईवटा चलचित्रमात्र यो वर्ष प्रदर्शनमा आए । केही वर्षअघि नै निर्माण भएको चलचित्र ‘जाउँ हिँड पोखरा’ ले राम्रो व्यवसाय गर्न सकेन । चलचित्र ‘रिफ्युजी’ पनि व्यवसायिक रुपमा सफल हुन सकेन । महिला निर्देशक सावित्री खत्रीद्वारा निर्देशित ‘काफल पाक्यो’ बाट भने जीवनले प्रसंसा कमाए ।
अप्रिल 12, 2016 | फेमस, समाज, सिनेमा, हट टपिक्स
२०७२ को आज अन्तिम दिन । भोलिदेखि हामी २०७३ मा पाइला टेक्दै छौ । यो बर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीले सबैतिर लथालिंग बनायो । यसका बाबजुद पनि नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा केही आशातित प्रगतिहरु भए । यो बर्ष रिलिज भएका चलचित्रहरु मध्ये सर्वाधिक हिट र आम्दानीका हिसाबले उत्कृष्ट ९ फिल्म यी हुन् ।
गत बर्ष वैशाख ११ गते प्रदर्शनमा आएको यो फिल्म निकै चर्चित बन्यो । रिलिज भएको भोलिपल्ट नै भूकम्प गएपछि यसलाई धक्का लागेको थियो तर यो बर्ष यो चलचित्र दुइ पटक रिलिज भए । संभवत: पहिलो पटक एकै वर्ष दुई पटक रिलिज भएको चलचित्र हो ‘रेशम फिलिली’ । अत्याधिक चर्चामा आएको यसको गीत ‘जालमा’ले गर्दा पनि चलचित्र बहुप्रतिक्षित बन्न पुगेको हो । यसका निर्देशक हुन् प्रनव जोशी ।
हेर्नुस रेशम फिलिली गीतमा गरिएको चर्चित डान्स
सामान्य कथा बस्तुमा निर्मित यो फिल्म पनि निकै हिट भए । निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालद्वारा निर्देशित यो फिल्ममा लगभग पशुपतिनाथ क्षेत्रकै दृश्यहरु समेटिएका छन् ।
भुवन केसीद्वारा निर्देशित यो फिल्म बर्षको अन्त्यमा रिलिज भए पनि निकै चर्चा कमायो । ‘ड्रिम्स’मा भुवनका सुपुत्र अनमोल केसीले अभिनय गरेका छन् । यो फिल्मले उनको करिअर नै उज्यालो बनाइ दियो ।
वैदेशिक रोजगारीको विषयमा तयार पारिएको फिल्म परदेशी पनि यो बर्ष सफल भए । नारायण रायमाझीद्वारा निर्देशित यो फिल्म मा इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङले अभिनय गरेका छन् ।
निर्देशक दिनेश राउत, निर्माता सुवास गिरी, नायक आर्यन सिग्देल, नायिका नम्रता श्रेष्ठको टिमले बनाएको ‘क्लासिक’ ले पनि सफलता प्राप्त गर्यो । चलचित्रमा नेत्रविहीन युवा–युवतीको भूमिका निर्वाह गरेका आर्यन र नम्रताको केमेस्ट्रीलाई दर्शकले मन पराए ।
सुदर्शन थापाद्वारा निर्देशित फिल्म प्रेमगीत पनि यो बर्ष हिट भए । यसको ‘म यस्तो गीत गाउँछु, जुन प्रेमगीत बनोस्’ गीत निकै मन पराइए । चलचित्रमा नायक प्रदीप खड्का तथा नायिका पूजा शर्माले अभिनय गरेका छन् ।
यो बर्ष नायक निखिल उप्रेतीले चलचित्र ‘भैरव’ बनाएर अभिनय र निर्देशन पनि गरे जुन निकै हिट बन्यो ।
हास्यकलाकार दीपकराज गिरी तथा दीपाश्री निरौलासहितको टिमद्वारा निर्मित तथा अभिनित फिल्म हो वडा न. ६ । उज्ज्वल घिमिरेद्वारा निर्देशित यो फिम पनि यो बर्ष सर्वाधिक हिट बन्यो । उनीहरुले यस अघि ‘छ एकान छ’ चलचित्र बनाएका थिए ।
‘कबड्डी’को सिक्वेलका रूपमा आएको चलचित्र ‘कबड्डी–कबड्डी’ले सफलता प्राप्त गर्यो । मुस्ताङको गाउँमा फुपुकी छोरीसँगको मायालाई अभिव्यक्त गर्न नसकेका काजी तथा काजीको उद्देश्यमा व्यवधान खडा गर्न आएका बमकाजीको कथालाई दर्शकले रुचाए । यसका निर्देशक हुन् रामबाबु गुरुङ ।
सर्वाधिक कमाउने बलिउडका १० हिरो
मार्च 15, 2016 | फेमस, सिनेमा, हट टपिक्स
बिश्वमा सर्वाधिक ठूलो आर्थिक कारोबार हुने फिल्मी क्षेत्र मध्ये बलिउड अगाडि छ । एउटा फिल्मकै करोडौको कारोबार हुन्छ बलिउडमा । त्यसो त बलिउड कलाकारहरुको आम्दानी पनि उत्तिकै आकर्षक छ । हेर्नुहोस् सर्वाधिक कमाउने बलिउडका १० हिरो ।
१. सलमान खान- ६० करोड
बलिउडका सर्वाधिक लोकप्रिय र सर्वाधिक कमाइ गर्ने कलाकार हुन् – सलमान खान । उनले ६० करोडसम्म कमाउछन । उनले खेल्ने फिल्म भनेपछि हुरुक्क हुनेहरुको जमात बाक्लो छ । त्यसो त उनलाई खेलाउन निर्माता/निर्देशनहरु मरिहत्ते गर्छन ।
२. आमिर खान- ५० करोड
सर्वाधिक कमाइ गर्ने अर्का कलाकार हुन् आमिर खान । उनले ५० करोडसम्म कमाउ छन् । उनले खेल्ने फिल्मले प्रायजसो अघिल्ला सबै फिल्मको रेकर्ड तोड्ने गर्छ । यो बर्ष उनको बहु प्रतिक्षित फिल्म दंगाल आउदै छ । यसको अहिले नै चर्चा चुलिन थालेको छ ।
३. अक्षय कुमार – ४५ करोड
अक्षय कुमारका बार्षिक प्राय ३ देखि ४ वटा फिल्म रिलिज हुन्छन । उनका अधिकांश फिल्मले औशत भन्दा बढी कमाइ गर्छ । उनका फिल्महरु हिट र सुपरहिट भएका छन् । उनका थुप्रै फ्यानहरु छन् । यो बर्ष पनि उनका धेरै वटा फिल्म रिलिजको तयारीमा छन् ।
४. शाहरुख खान – ४० करोड
बलिउड किङ्का रुपमा लिइने शाहरुख खान पनि निकै लोकप्रिय कलाकार हुन् । उनले हरेक बर्ष सुपरहिट रेकर्ड राख्ने गरेको बिगतका तथ्यांकहरुले देखाउछ । उनका भारतमा मात्रै होइन बिदेशमा पनि थुप्रै फ्यानहरु छन् । त्यसैले पनि उनको फिल्मले अन्तराष्ट्रिय बजारबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्ने गर्दछ । उनले एउटा फिल्मबाट ४० करोड सम्म लिन्छन ।
५. ऋतिक रोशन- ३५ करोड
बलिउडको ‘ग्रिड गड’का रुपमा चिनिने ऋटिक रोशन पनि लोकप्रिय कलाकार हुन् । उनी एउटा फिल्मबाट ३५ देखि ४० करोडसम्म कमाउछन् । उनको आगामी फिल्म मोहन्जो डरोबाट ५० करोड भन्दा बढी अपेक्षा गरिएको छ ।
६. रणबिर कपुर- ३० करोड
बलिउडका अर्का सुपरस्टार हुनक रणबिर कपुर । सन् २००७ देखि फिल्मी दुनियामा डेब्यु गरेका हुन् उनले । उनी एउटा फिल्मबाट ३० करोड सम्म कमाउछन् । उनका पनि थुप्रै फ्यान र प्रशंसकहरु छन् ।
७. अजय देवगण – २५ करोड
बलिउडको ‘साइलेन्ट मेशिन’ का रुपमा लिइने कलाकार हुन् अजय देवगन । उनले एउटा एउटा फिल्मबाट २५ करोडसम्म कमाउछन्
८. अमिताभ बच्चन – २० करोड
अमिताभ पूराना, लोकप्रिय र चर्चित कलाकार हुन् । उनी यसपटक मात्रै होइन बर्षेनी सर्वाधिक कमाउने कलाकारहरुको सूचीमा पर्छन । उनी फिल्मी क्षेत्रका साथै बिभिन्न टिभी शोहरु र अन्य काममा समेत उतिक्कै लोकप्रिय छन् । उनी एउटा फिल्मबाट २० करोड भन्दा बढी कमाउछन ।
९. सैफ अलि खान – १५ करोड
महंगा अर्का बलिउड हिरो हुन् सैफ अलि खान । उनी एउटा फिल्मबाट १५ करोड सम्म कमाउछन् ।
१०. रणबिर सिंह- १५ करोड
बलिउडका अर्का सुपरस्टार हुन् – रणबिर सिंह । रामलिला, बलिराओ मस्तनी लगायत सुपरहित फिल्मका हिरो उनी पनि महंगा कलाकार हुन् । उनले एउटा फिल्मबाट १५ करोडसम्म कमाउछन् ।
यो पढ्नु भयो त ?
केटीहरु यस्तो अश्लिल फिल्म हेर्न रुचाउछन् (भिडियो सहित)
नेपाली जडीबुटीको बिज्ञापन गर्दै ३ बर्षीय बालिका (हेर्नुस भिडियो)
हेरौं फ्रिमा फिल्म
नोभ 21, 2012 | टेक्नोलोजी, सिनेमा
तपाइँ फिल्मको शौखिन हुनुहुन्छटेलिभिजनमा केबुल मार्फत आउने फिल्मी च्यानलका पुराना फिल्म देखी वाक्क हुनुभएको छ? या टेलिभिजनमा विज्ञापन नै विज्ञापनको बीचमा फिल्म हेर्दा हेर्दै वाक्क हुनुभएको छ। फिल्म हेर्नकै लागि सीडी र डीभीडीमा हजारौं खर्चनु भएको त छैन। यदी त्यसो हो भने निशुल्क विज्ञापन नझेलीकन फिल्म हेर्ने उपाय पनि छ। जुन तपाइँको लागि सबै भन्दा उत्तम हुन्छ। फिल्मका शौखिनका लागि केबुल टेलिभिजनको अर्को विकल्प हो इन्टरनेट। जहाँ तपाइँले वर्षौं सम्म हेर्दा पनि नसकिने फिल्महरुको भण्डार छ। त्यसका लागि कुनै द्रूत गतिको इन्टरनेट प्याकेज पनि लिनु पर्दैन। घरमा रहेको सामान्य गतिको इन्टरनेट कनेक्सनबाट नै तपाइँले असंख्य फिल्महरु निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि फिल्मको विश्वको सबै भन्दा ठूलो भण्डार यूट्यूब तपाइँको साथ छ। जहाँ नेपाली, हिन्दी, अंग्रेजी देखी रसियन, फ्रान्सेली लगायत विश्वका सबै जसो भाषाका फिल्म निशुल्क उपलब्ध छन्। जसका लागि न कुनै पैसा नै तिर्नु पर्छ न कुनै एकाउन्ट बनाएर लगइन नै गर्नुपर्छ।
यूट्यूबमा त ढिलो खुल्छ?
यदी तपाइँको इन्टरनेट कनेक्सन कम गतिको छ र यूट्यूब ढिलो खुल्छ। भिडियो Buffering भएर हैरान हुन्छ भने त्यसको सजिलो उपाय छ। जसको कारण तपाइँ बिना Buffering भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको घरको इन्टरनेटको गतिको आधारमा बिना वा कम मात्र Buffering मा फिल्महरु हेर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी हेर्ने त?
नेपाल जस्तो इन्टरनेटको गति कम भएका मुलुकका लागि यूट्यूबले लाइट भर्सन ल्याएको छ। जसको कारण कम भन्दा कम डाटा डाउनलोड गरि यूट्यूबका भिडियो तथा फिल्म हेर्न सकिन्छ। जसको नाम हो YouTube Feather। यसमा सामान्य रुपमा खुल्ने यूट्यूबमा भन्दा कम मात्र डिजाइन डाउनलोड हुन्छ जसले गर्दा का लागि समय लाग्दैन। लागे पनि निक्कै कम समय। नेपाल टेलिकमको एडीएसएलमा त यसबाट नरोकिइकन भिडियो हेर्न सकिन्छ। त्यसका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि देखिने यूट्यूबको यसखालको पेजमा गएर Join the “Feather” Betaमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाइँले नरोकिइकन फिल्म वा अन्य कु नै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदी तपाइँ यूट्यूबको यो लाइट भर्सन केही समयको लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पेजमा देखिएको यस्तो छनौट विकल्प मध्ये मा क्लिक गर्नुस्। यदी सँधै छिटो र नरोकिइकन भिडियो तथा फिल्म हेर्ने हो भने Just this once मा क्लिक गर्नुस्। Permanently मा क्लिक गरेपछि यूट्यूबका सबै सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ।
– मदनमणि अधिकारी (मैले मेरो घरमा प्रयोग गरेर हेर्दा छिटो भएको पाएँ। तपाइँको अनुभव लेख्नुहोला।)